Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Inona ny MVP sy ny fomba fampiharana azy amin'ny famolavolana fitaovana
Mety ho naheno momba ny MVP ianao - ny vokatra kely indrindra azo iainana - ary mety nampifandrainao tamin'ny rindrambaiko izany. Raha ny tena izy dia mihatra amin'ny fitaovana ihany koa io hevitra io. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao momba ny MVP ary ho hitanao ny fomba ampiasanao azy amin'ny famolavolana vokatra elektronika.
Ny iray dia afaka mampihena ny vidiny sy ny fotoana ho an'ny famolavolana ary hamorona ny vokatra misy endri-javatra farafahakeliny.
Ny fampiasana ny fitsipiky ny MVP dia hahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny safidin'ny mpanjifa.
MVP dia vokatra noforonina tamina ezaka farafahakeliny.
Mazava ho azy fa ny famolavolana sy ny famokarana vokatra, na rindrambaiko na fitaovana, dia mitaky ezaka sy fandaniana. Raha toa ka vaovao ny vokatra na tsy azonao antoka ny fahitan'ny mpanjifa azy dia azonao atao ny mampihena ny vidiny sy ny fotoana hanaovana ny endrika ary mamorona ny vokatra misy endri-javatra farafahakeliny. Mazava ho azy, ny famoronana vokatra iray dia azonao atao ny mihevitra izay tadiavin'ny mpanjifanao ary vonona ny handoa izany. Noho io antony io dia azonao atao ny mampiasa ny fitsipiky ny MVP ary mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny safidin'ny mpanjifa. Amin'izany dia hanangona tamberina avy amin'ireo mpanjifanao voalohany ianao. Io dia ahafahanao mampivelatra ny vokatra ho avy miankina amin'ny toetran'ny mpanjifa. Ka ny MVP dia vokatra noforonina tamina fiezahana farafahakeliny.
Ahoana ny fampiasana MVP amin'ny fitaovana?
Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana an'io hevitra io dia tsy mitovy amin'ny famolavolana fitaovana. Voalohany, tokony hamaritra endri-javatra tsara indrindra ho an'ny vokatrao ianao. Ataovy ao an-tsaina fa ny endri-javatra tsirairay dia hampitombo ny fahasarotan'ny vokatrao ary, vokatr'izany, ny vidiny sy ny ezaka amin'ny famolavolana azy. Mba hisorohana ny fampidirana endri-javatra be loatra, mifidiana. Ho fanombohana dia azonao atao ny mitanisa ireo endri-javatra mety ho an'ny vokatrao, mametraka azy ireo amin'ny fahasarotana sy ny vidiny ary manao laharam-pahamehana ny fandinihana ny filan'ny mpanjifa.
Avy eo, fantaro ny vidiny sy ny fotoana ho an'ny fampandrosoana ny endri-javatra tsirairay ary, farany, ny vidin'ny vokatrao. Mitadiava fifandanjana eo amin'ny vidin'ny famokarana sy ny vidin'ny vokatrao. Soso-kevitra ny hifantoka amin'ireo fiasa izay inoanao fa hanampy ny taha ambony indrindra amin'ny vokatrao.
Aorian'ny fanasokajiana ireo fiasa dia esory ireo manana be pitsiny sy vidiny eo an-tampon'ny lisitrao. Ny fiasa sarotra sy lafo dia tsy azo foronina amin'ny resaka MVP. Fa kosa, fantaro ireo endri-javatra lafo vidy amin'ny laharam-pahamehan'ny mpanjifa. Ny MVP dia tokony hampiditra endri-javatra mora sy mora.
Manaraka izany, mahazoa ny vokatra azo atao farafahakeliny eny an-tsena faran'izay haingana. Ny hevi-dehibe momba ny MVP dia tsy miankina amin'ny frais kely indrindra ihany fa amin'ny fotoana farafahakeliny lany amin'ny famolavolana vokatra voalohany. Noho izany, mitsitsia ny fotoanao ary miroso amin'ny fianarana ny filan'ny mpanjifa. Azonao atao ny manangona hevitra avy amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny varotra sy ny angona varotra isan-karazany. Ity angon-drakitra ity dia hampiasaina amin'ny kinova ho avin'ny vokatrao izay hamaly ny fitakian'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny fampiasana ny valiny dia afaka manapa-kevitra ny hamorona vokatra hafa ianao. Ataovy ao an-tsaina fa ny fiasa tsy ilaina amin'ny MVP anao dia hoesorina amin'ireo kinova vaovaon'ny vokatrao.
Noho izany, ny MVP dia mamela ny fandaniana fotoana sy vidiny kely kokoa amin'ny famolavolana vokatra, fanangonana valiny avy amin'ny mpanjifa tena izy ary fanitsiana ny vokatrao amin'ny tamberina. vakio ny lahatsoratra bebe kokoa amin'ny famolavolana elektronika.